के सुन वा अन्य धातुले कोरोना फैलाउन मद्दत गर्छ? धातु र कोरोना भाइरस संक्रमणबीच कुने सम्बन्ध छैन। सुन, सुनजन्य पदार्थ वा अन्य धातुले कोरोना संक्रमण फैलाउन सघाउँछन् भन्ने कुरा वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भएको छैन। शनिबार, जेठ २२, २०७८
कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि स्तनपान गराउन मिल्छ की मिल्दैन? प्रश्न: कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि आमाले आफ्ना बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ की मिल्दैन? आइतबार, जेठ २, २०७८
के ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ? हुँदैन। नेपालमा अहिलेसम्म पाँच वर्ष मुनिका ३ हजार ५६५ जनालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ भने १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आइतबार, वैशाख ५, २०७८
बुद्धि बंगारा पलाउँदा किन दुख्छ? बुद्धि बंगारा मुखमा मिलेर नआएको अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहमा निकाल्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। कहिलेकाहीं बुद्धि बंगारामाथिको मासु/गिजालाई काटेर पनि दाँतमा हुने इन्फेक्सन/दुखाइ कम गर्न सकिन्छ। आइतबार, फागुन १६, २०७७
अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ? उपचार के हो? अनुहारमा कनिका जस्तो देखिने सेतो, पहेंलो रङको कडा बल जस्तो दानालाई मिलिया भनिन्छ। मिलिया मुख्यगरी अनुहार, नाक, गाला तथा आँखाको तल्लो भागमा आउँछ। आइतबार, पुस २६, २०७७
गर्भावस्थामा पिसाबसम्बन्धी संक्रमण किन हुन्छ र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? बिहीबार, पुस ९, २०७७
एक पटक प्रयोग गरिसकेको तेल किन पुनः तताएर प्रयोग गर्नुहुँदैन? बिहीबार, मंसिर १८, २०७७
कस्तो अवस्थामा ल्याबमा नमुना साटिन सक्छ? बुधबार, मंसिर १७, २०७७
कोरोनाबाट गर्भवती कति असुरक्षित? ५ प्रश्न र उत्तर बुधबार, चैत ५, २०७६
कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी ८ जिज्ञासा र उत्तर शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६
नोवेल कोरोना भाइरसका विषयमा ९ जिज्ञासा र उत्तर शुक्रबार, माघ १०, २०७६
घरमै डाक्टर : जाडोमा हिटर वा आगो बालेर सुत्दा किन जान्छ ज्यान? सोमबार, पुस २१, २०७६
हर्टअट्याकको जोखिम जाडोमा किन बढी हुन्छ? मंगलबार, पुस १, २०७६
मुटुको बाइपास सर्जरी भनेको के हो? सोमबार, असोज १३, २०७६
झरीको समयमा छालामा के-के समस्या आउँछ? कसरी जोगिने? शनिबार, असार २८, २०७६
हातखुट्टा मर्किए के गर्ने? सोमबार, असार २३, २०७६
पित्तको पत्थरी कस्ता मानिसलाई बढी हुन्छ? बुधबार, असार १८, २०७६
गर्मीमा अनुहारबाट किन निस्कन्छ चिल्लोपना? सनस्क्रिन कस्तो लगाउने? मंगलबार, असार ३, २०७६
मुखमा घाउ आयो? के गर्ने? मंगलबार, जेठ २८, २०७६
सास फेर्दा फोक्सोमा धुलो कसरी पुग्छ र त्यसले के के असर गर्छ? बुधबार, जेठ २२, २०७६
गर्मी महिनामा किन हुन्छ हेपाटाइटिस ए र ई? शनिबार, जेठ ४, २०७६
बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ? यस्ता छन् रोक्ने घरेलु उपाय शनिबार, चैत १६, २०७५
मस्तिष्कघात कसरी हुन्छ? उपचार के हो? आइतबार, चैत १०, २०७५
बुढेसकालले शरीरमा के-के परिर्वतन ल्याउँछ? बुधबार, फागुन २९, २०७५
जाडोयाममा गर्भवतीले के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? शनिबार, पुस ७, २०७५
घरमै डाक्टर : तीन हप्तादेखि लगातार खोकी लागिरहेको छ, के भएको होला? के गर्नुपर्छ? बुधबार, पुस ४, २०७५
बच्चाले सास फेर्ने क्रममा घ्यारघ्यार गर्छ किन होला? उपचार के हो? शनिबार, कात्तिक २४, २०७५
मुटुको बाइपास सर्जरी भनेको के हो? शनिबार, असोज १३, २०७५